डब्ल्यूएचओले भन्यो - कोरोना महामारी अब नेपालसहित दक्षिण पूर्वीएसियातर्फ सोझिँदैछ - Narayanionline.com
डब्ल्यूएचओले भन्यो – कोरोना महामारी अब नेपालसहित दक्षिण पूर्वीएसियातर्फ सोझिँदैछ
काठमाडौं, चैत ५-
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी अब नेपालसहित दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा फैलिन सक्ने भन्दै कडा चेतावनी दिएको छ ।
डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्वीएसियाकी क्षेत्रीय निर्देशक डा. पुनम खेत्रपाल सिंहले भनेकी छिन्, ‘अवस्था तीव्र गतिमा बिग्रँदै गएको छ । हामीले तत्काल भाइरस धेरै मानिसमा फैलिन नदिन अपनाउने सावधानी बढाउन जरुरी छ ।’
दक्षिण पूर्वी एसियाली देशमा कोभिड-१९ विस्तार हुन नदिन गरिएका प्रयास तत्काल सघन र प्रभावकारी बनाउन नसकिए अवस्था भयावह हुने चेतावनी डब्ल्यूएचओले दिएको हाे ।
डब्ल्यूएचओले दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रका रूपमा नेपालसहित ११ मुलुकलाई राखेको छ । तीमध्ये ८ देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिइसकेको छ । जसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी थाइल्यान्डमा १ सय ७७ जना संक्रमित भएका छन् ।
यस्तै इन्डोनेसियामा १ सय ३४, भारतमा १ सय २५, श्रीलंकामा १९, माल्दिभ्समा १३ तथा बंगलादेशमा ५ जना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तै नेपाल र भुटानमा पनि १/१ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएको डब्ल्यूएचओले उल्लेख गरेको छ ।
चितवनमा निर्माणाधिन रंगशालामा पहिलोपटक क्रिकेट खेलियो
चितवनका एक व्यक्तिको मनाङमा देखियो कोरोना संक्रमण
मगर संस्कार र संस्कृति हेर्न चिलाउने खर्क जाने कि !
भीआईपीका सुरक्षाकर्मीलाई सीमामा खटाइने
चीनमा कोराना संक्रमित घट्दै, ५० हजार जना निको भए
अठार जिल्लाका तीन हजार एक सय ३८ डेङ्गु बिरामीको चितवनमा उपचार
बर्दघाटमा खोलामा डुबेर दुई बेपत्ता